हिँड्दा हात 'लेफ्ट-राइट' किन हल्लिन्छ ? - मूल्याङ्कन अनलाइन
आकाश महर्जन | October 12, 2017
हिँडिरहेको मानिसलाई हेर्नुहोस्, दायाँ खुट्टा अगाडि बढ्दा बायाँ हात अगाडि जान्छ र बायाँ खुट्टा अगाडि बढ्दा दायाँ हात अगाडि जान्छ । यो कुरा हामी आफ्नै हिँडाइमा पनि याद गरिरहेका हुन्छौँ । र, बालबालिकाहरूलाई विद्यालयहरूमा ‘लेफ्ट–राइट’ भनेर यसरी हिँड्न नै पनि सिकाइन्छ । हिँड्दा आखिर किन हल्लिन्छ त हाम्रो हात ?
सतही रुपमा हेर्दा हिँड्दा हात हल्लाउनु अनावश्यक जस्तै लाग्न सक्छ । साथै हात हल्लिँदा अनावश्यक रुपमा केही मात्रामा ऊर्जा खर्च भएको जस्तो लाग्न सक्छ । तर, यसले हाम्रो हिँडाइमा ठूलो असर पार्छ र ऊर्जा खर्च हुनुको साटो झन् बचत हुन्छ । कसरी त ?
हामी हिँड्दा जुन खुट्टा अगाडि सार्छौं, हाम्रो शरीर त्यही दिशामा घुम्न खोज्छ । उदाहरणको लागि यदि बायाँ खुट्टा अगाडि सारेका छौँ भने शरीर बायाँबाट दायाँतिर घुम्न खोज्छ । तर, दायाँ हात अगाडि बढाउँदा बायाँ खुट्टा अगाडि बढाउनाको कारण शरीरमा उत्पन्न हुने प्रभावको उल्टो प्रभाव पर्न जान्छ, जसको कारण शरीर सन्तुलित हुन्छ र हिँड्नमा सजिलो हुन्छ । तर, हात अगाडि नबढाउँदा भने शरीरलाई सन्तुलित पार्ने काम खुट्टाले मात्रै गर्नुपर्ने हुँदा खुट्टाले बढी बल लगाउनुपर्ने हुन्छ, जसको कारण बढी ऊर्जा खर्च हुन्छ ।
वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धानका आधारमा हात नहल्लाई हिँडेमा १२ प्रतिशत बढी ऊर्जा खर्च हुन्छ । यति नै ऊर्जा खर्च गरेर सामान्य रुपमा हिँड्ने हो भने हिँडाइको गति २० प्रतिशतले बढ्छ ।
« भियतनाममा दुई दिनदेखिको अविरल वर्षाबाट ३७ को मृत्यु, ४० बेपत्ता (Previous News)
(Next News) काँग्रेससँग पार्टी एकीकरण हुन सक्छ – गच्छदार »